किन पिउनु हुँदैन दूधकाे चिया? - Health TV Online
किन पिउनु हुँदैन दूधकाे चिया?
अधिकांश मानिस आनन्द, शरीर न्यानो गराउन चिया पिउने गर्छन्। चियामा मानवस्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने खालका धेरै तत्त्वहरू पाइन्छन्।
विशेषतः कालो चियामा प्रशस्तै एण्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन पाइन्छन्। यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुको साथै, रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने, कोषका हुने क्षयलाई रोक्ने, मधुमेहबाट बचाउने साथै मुटुसम्बन्धी रोगबाट पनि बचाउँछ। तर, चियामा अलिकति पनि दूध मिसlयो भने त्यसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्छ।
दूधले चियालाई कसरी विष बनाउँछ?
चियामा दूध मिसाएर पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले एक खोज गरेका थिए। उनीहरूले १६ जना स्वस्थ स्वयंसेविकामा परीक्षण गरेका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले ती महिलाहरूलाई एक दिन तातोपानी, अर्को दिन कालो चिया अनि अर्को दिन दूध चिया पिउन दिएर उनीहरूको मुटुमा भइरहेको गतिविधि निरीक्षण गरेका थिए।
कालो चिया पिउनुहोस्। कालो चियाका अनगिन्ती फाइदाह छन्। यसले मधुमेहलाई समेत ठीक गर्छ। मृगौलाको कार्य शक्तिमा समेत कालो चियाले धेरै राहत पुर्याउनेअनुसन्धानबाट पत्ता लागेकाे छ।